Kwamanye amazwe, ethandwa kakhulu phakathi kwabantu isebenzisa lesi sitshalo njengenhlangano artichoke. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ka yakhe eyaziwa kusukela ezikhathini zasendulo. Lesi sihlahlana kungokwalabo Compositae, ngoba ezinkulu efihlekile ezidliwayo. Empeleni, lo mkhiqizo liyafana efihlekile omkhulu. Of Ikakhulukazi ukuvelela artichoke atholwe ensimini ka-United States, lapho kwake ayisungula izifiki ezazivela eYurophu.
inflorescences Meaning artichoke Culinary
It is kulelizwe simila ithole nomgomo esizifanele. Ngo ezihlukahlukene zokupheka cuisine kazwelonke azisetshenziselwa izithelo abasha, kodwa futhi abavuthiwe izinso kamuva, okusikhumbuza ngaphezulu uhlevane ubudala. Okokuqala, njengoba umthetho, kudingeka ukulungiswa ukudla okulula, salads. Ngokuqondene efihlekile emikhulu, khona-ke bathunyelwa izitsha ashisayo. Izinketho ukupheka zalesi sitshalo awubalwa. Phela, ngaphezu kwalezi zindlela, i-artichoke, inzuzo kanye nobungozi impilo okufanele ajwayelekile kubo bonke, futhi ongasindisa, upheke, udle eluhlaza. Njengoba ukudla kufanelekile kuphela grinded umnyombo isitshalo, into efuze leyo walnuts ezivela kuye ukulungiselela esihle nososo, ayinhlama kanye purees.
Into ebaluleke kakhulu - ke ukukhetha izithelo kwesokudla. On izinga artichokes akasoze izilongotshane elimbozwe ifu elimnyama. izinso enempilo abe luhlaza bushelelezi, ngempela enwebekayo kome kakhulu. Usayizi lesi sidlo nakanjani asihlobene. Nokho, kuze kube sekupheleni ukuqhakaza izimbali blue artichoke e ukudla bengadli, kodwa bathola bona e-decor Culinary.
Umkhiqizo Calorie nezakhi
Artichoke, inzuzo kanye nokulimala, okuqukethwe kwama-kilojoule nezinye izimfanelo ezidinga ukucatshangelwa ezinemininingwane eminingi, akumangalisi ngakho ayazise labapheki. Ngaphezu kwalokho ukunambitha izinzuzo zalesi sitshalo kungaba ozibongayo ngokuphepha we Ukwakheka ocebile izakhi adingekayo emzimbeni. Phakathi kwezakhi saziso, okuyizinto ezibalulekile for the irisidi ukudla nsuku zonke, efihlekile aqukethe cishe 3% of the amaprotheni, bayingcosana kakhulu emifino futhi 15% carbohydrate. izinto eziwusizo eziningi, phakathi okuyinto yensimbi, i-calcium ne-phosphate, amavithamini B, C, P, carotene nokuningi. Ingasaphathwa ukutholakala acid ezibalulekile eziphilayo ingxenye inflorescence isitshalo.
Ekubhaleni ekudleni kwesisindo iyisibusiso elikhulu ngeke artichoke. Calorie futhi izakhiwo (inzuzo kanye nokulimala kusukela ukusetshenziswa lesi sitshalo namanje ayitholakalanga i ocacile indlela zokusiza kuma ambulensi) kuthiwa yemifino efanelekayo le njongo kangcono, nje abatholi. Kuyo inhlanganisela ephelele esincane kilojoule (kuphela 47 100 g umkhiqizo) kanye izimfanelo ezibalulekile yokudla okunempilo.
A Kusizuzisa emzimbeni
Lo mkhiqizo Ukudla ongaba nesizathu esizwakalayo esikhundleni isitashi, ngakho ngokuvamile ukusetshenziswa kwaso Kunconywa for abanesifo sikashukela. Ekhulwini XVIII, abelaphi belulekwa artichoke ukuhlupheka ezifweni sifo, isibindi. Kuze kube manje, lo odokotela akazange aphike nokwenziwa yayo lula umzimba, isisu kanye isinyathelo choleretic. Ngokuvamile, ukulungiswa isithako nomuthi zokwelapha potions azisetshenziselwa efihlekile kodwa futhi amaqabunga, ingxenye impande. Artichoke, inzuzo kanye nokulimala ngasinye okufanele siqashelwe ekhethekile, kunciphisa lizinga cholesterol egazini kanti uba isilinganiso zokuvimbela ngokumelene isifo sokuqina kwemithambo yegazi.
Kuvele iqiniso elithakazelisayo Kuyaphawuleka ukuthi ngisho endulo, le AmaGreki ayekholelwa artichoke juice ikhambi, kusiza ukuba sibhekane ngokuphumelelayo nezinwele. ketshezi okuholela kwakwanele ukuba uwuhlikihle ikhanda okungenani izikhathi eziningana ngenyanga.
Ngo lanamuhla imithi ehlukile ijusi fresh zemifino ukuncoma ukuthatha amadoda njengoba ivuselela isifiso sobulili. Kubantu abanalesi inkinga ajulukayo artichoke futhi isixazululo esingcono.
Futhi uzinake ukuthi amazinyo ithole ukusetshenziswa le-artichoke. izakhiwo awusizo (ezinhle futhi zilimaze izitshalo kukhona endaweni isilinganiso engalingani) neqhaza ngcono ngalo ingaphakathi ngomlomo, ukubhekana nezinkinga ezifana stomatitis, imifantu ulimi, inkwethu.
Okwamanje, imboni kwemithi ngokuvamile zokungcebeleka ukuze ukusetshenziswa emsebenzini wokukhiqiza imithi esekelwe artichoke. Okokuqala sikhuluma imithi, lesiniketwe ongoti for ekwelapheni isifo sokusha kwesibindi, izifo cholelithiasis, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, komzimba. Ngaphezu kwalokho, ifakiwe ku ukubunjwa yokugcoba, okhilimu, kubalulekile nokwelashwa psoriasis futhi eczema.
Izimo ukusetshenziswa artichoke
Phakathi naleso sikhathi, naphezu ezahlukene izinzuzo, i-artichoke, inzuzo kanye nokulimala okumele okunengqondo kuhlaziywe ngaphambi kokusebenzisa Uphatha kabi pheshana emathunjini zabantu abaphethwe kolwelwesi, asidi ongaphakeme, umfutho ophansi wegazi. Kuyaziwa ukuthi isakhiwo se-isitshalo kuhlanganisa into polyphenol ukuthi kwandisa ukwakheka kanye excretion of Bile. Ngakho-ke, abantu abaphethwe cholecystitis, kungcono ukuqeda ngokuphelele ekudleni kwakho ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo.
Ubukhulu nemifino imithetho isitoreji ukunquma indlela oyifunayo sokulungiselela. Ngokwesibonelo, ihlumela ezincani inflorescence emnandi ukunambitheka kanye ngaphandle kokwelashwa ukushisa, kuyilapho izithelo ezinkulu ovuthiwe kudliwa eluhlaza ngeke isebenze, kusukela Imicu yotshani izitshalo kanzima futhi kunganambitheki. Artichoke namahlamvu evulekile brown ngokuvamile asifanele ukudliwa abantu.
Indlela ukugcina izithelo?
Imigomo nemibandela isitoreji isithelo kuthinte izinga yabo. Kungase kubangele tinkhinga komzimba artichoke, okuyinto ngenxa yesitoreji eside umswakama amuncwa nephunga kwemvelo. Isikhathi ekahle ukuze kulondolozwe izindawo ewusizo zemifino kakhulu ngesonto, ngakho musa nengcugco artichoke. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka (indlela ukupheka i-artichoke, esaziwa isibalo esikhulu sezinto izakhiwo ezibalulekile, kukhona inala amathiphu), ngokwezinga elithile, kunqunywa isikhathi isitoreji. Ngakho ngokuvamile emva ukuthengwa lot kanye uqhubekele zokuyithambisa nasekusindiseni umkhiqizo.
Njengoba sazi ukuthi i-artichoke kungokwalabo ekilasini izitshalo yemifino, yokuzalanisa yayo kanye ukutshalwa kakhulu yisithombo indlela.
Isinyathelo sokuqala siwukuba ukulungiselela ukutshala imbewu. Kungcono ukuba bafeze lo inqubo ekuqaleni kukaMashi. Uzodinga esitsheni ngamanzi. Imbewu kufanele bafake emanzini bese ulinda ukuvuvukala eyalandela ukuhluma.
Kubalulekile ukuba balondoloze izinga lokushisa adingekayo ukuze kuzuzwe imiphumela oyifunayo. Ekhaya, unomphela umthombo ukushisa amabhethri ngalesi sikhathi sonyaka. Nokho, ngemva ukubukeka izimpande amancane, kuyinto efiselekayo ukufundisa imbewu tempering. Ungenza lokhu ngokubeka esitsheni amahlumela emakhazeni izinsuku 10-14.
Khona-ke ayoliswe esizayo artichokes (izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka kanjani sikhule futhi ulungiselele lesi sitshalo - konke lokhu ulwazi abalandeli abaningi umkhiqizo ezaziwa) yatshalwa ebhodweni olungiselelwe noma ibhokisi elikhulu. Kuze okwamanje we ukufakelwa lokuqala umthamo Imininingwane endishini ahlukene ngizodabula cishe inyanga. Lwathi luphela entwasahlobo izithombo ukulungele itshalwe ekhanyayo. Kwakuphakathi nalesi sikhathi ingozi frost, okungaba yingozi kuthinte isimo yisithombo incane. Ngo inqubo kokufika izitshalo ezisencane kufanele kukhunjulwe ukuthi artichoke omdala has a usayizi esikhulu, ngakho ukusabalalisa izithombo abasha ezikahle at ibanga 60-70 cm ngaphandle esikhungweni 20-25 cm ukujula.
Indlela anakekele artichokes?
Ukunakekela lezi izitshalo, kanye nezinye izilimo eziningi zemifino akudingi indlela ekhethekile. Kudingeka futhi inhlabathi okuxekethile, ukungabi ukhula eseduze, izinyathelo okuhloswe ngaso nokuvinjelwa kwezifo nezimbungulu. Artichoke, inzuzo kanye nokulimala ukuthi ngeke abashiye ubani nandaba, akudingi njalo ukuthambisa luningi. Yiqiniso, uma nesomiso, kuyinto efiselekayo ukunikeza izitshalo nge umswakama eyanele.
Ukuqeda slugs kanye abamnyama bola kungenzeka esebenzisa sishaye nezixazululo ezikhethekile. Ikakhulu yakhetha ukusetshenziswa infusions zokukhiqiza oluyingozi. Ngilusizo isinambuzane (izinyosi, iminyovu futhi t. D.) Predosteregut artichoke aphid kusukela nesenzakalo, kaningi kangaka endaweni le nectariferous ukugqashuka izitshalo yemifino noma izimbali.
Aspartame: umonakalo nemiphumela emzimbeni womuntu
Interior umhlobiso balcony: iluphi usizo lwezinto ezibonakalayo ukukhetha?